Israel oo Qalabkii Muranka Dhaliyey ka Saartay Al-Aqsa
Israel ayaa maanta billowday in qalabka birta sheega ee dadka lagu baaro ay ka saarto albaabka masjidka Al-Aqsa, si ay u yareyso xiisadda ka dhalatay ee ka carreysiisay muslimiinta, islamarkaana dhaliyey isku dhacyo xooggan.
Tallaabadan ayaa timid kadib markii golaha wasiirada Israel ay go’aan ku gaareen in qalabkan lagu beddelo kaamirooyin duuba dhaqdhaaqyada dadka.
Si kastaba inkasta oo qalabkii muranka dhaliyey meesha laga saaraya, ayaa haddana waxaa weli socday isku dhacyada ka taagan albaabka laga galo xeendaabka uu ku dhex yaallo masjidka ee u dhaxeeya ciidamada Israel iyo Falastiiniyiinta.
Dhinaca kale, ergeyga QM ee hanaanka nabadda ee Bariga Dhexe, Nikolay Mladenov, ayaa ku baaqay in xal deg deg ah laga gaaro xasaradaha ku xeeran masjidka Al-Aqsa.
“Waxaan weydiisanayaa dhammaan dalalka inay saameyntooda u adeegsadaan inay dhinacyada ishaya ku dhiiri geliyaan inay qaboojiyaan xiisadda, islamarkaana xaqiijiyaan in nabad-galyo ay helaan dadka wax caabudaya” ayuu yiri Nikolay Mladenov.